Ndakasvirwa nevasikana two kumaAvenues kusvikira vatunda vese | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Ndakasvirwa nevasikana two kumaAvenues kusvikira vatunda vese
Ndakasvirwa nevasikana two kumaAvenues kusvikira vatunda vese
Chemusi uyu hameno zvaiyitika ndakati manheru after ndabva kuzvibata bata ndakatunda asi mboro haina kurara yakaramba yakamira kunge simbi. Ndakabuda ndikayenda kubasa as usual asi mumusoro ndaizvibvunza kuti sei mboro irikuita kunge yakangomira but no answer. Ndakasvika kubasa ndokupedza hangu, ndichiyenda kumba ndakafonera babe rangu ndikamuudza zvaiyitika but not in so many details ndakangoti haa babe ndakusuwa manje chidzoka tisvirane, mwana akaseka mhani ipapo kuita kunge ndataura joke ini nechemumoyo ndaitorevesa.
Ndakati ndichisvika pamba pandaigara kuma Avenues paigara vamwe vasikana vaive ma students pa UZ. Ndaigara ndichivaona everyday but taingomhoresana chete, mumwe wacho akabva ati ndokumbirawo Nando’s yandainge ndakabata ndikabva ndati huya kuroom kwangu utore ndinokusiira. Akatanga kuseka zvikanzi ichiri Nando’s chete here yaurikuda kundipa, ndokubva ndamuti yes of course chii chimwe. Ndakapinda muroom mangu ndokubva ndatanga ndageza semunhu ainge asina tarisiro yekuti musikana uya angauye kumba kuzotora Nandos iya.
Security pamba pandaigara was very good saka kukiya door taingoitira chirago chete but one wouldn’t mind kurara door rakavhurwa and musi uyu ndainge ndisati ndakiya semunhu ainge asati akurara. Ndakapedza kugeza ndokupukuta and walked into my room ndisina kupfeka ko babe rangu rainge risipo and plan was kuti ndidye then ndozofonera babe kuti tiite hedu sekisi yepafoni. Ndakarohwa nehama ndichiwona vasikana vaye two vakagara pacouch yangu apa inini ndainge ndirimusvo, pandikada kuturner maziso avo vese ainge ari pamboro yangu yaitoita kunge yakamira zvayo.
Pandikada kutiza mumwe wacho akabva ati haa usatye hatisi vana vadiki isisu ndakada kuseka asi kamwe kamoyo kainge kachinyarira but semurume ndakazvishingisa. Ndakangoti it’s uncomfortable because imimi makapfeka, guys haaa kunze uku kune vana vakanaka mhani. Mumwe wacho akangosimuka ndokubva abvisa hembe dzese kusara ari musvo seni zvikanzi are you comfortable now, ndakangotanga kuseka. Mumwe wacho akabva ananga kudoor ndokubva akiya akati ahhh ndingasarire ndega ndega achibva abvisawo dzake. Nekumira kwainge kwakaita mboro yangu, kamwe kamoyo kaifara kuti nhasiiii asi kamwe kachifunga kuti ndirikufanirwa kufonera babe rangu in 30mins.
Nandos yacho yakazodyiwa here ipapo, ndakarariswa pabed vanhu vachiita kuchinjana kuyamwa mboro iyo yaibva yaiita zvekuwonererwa ichiwedzera kumira kuita kunge munhu anwa silver-bullet, ndainge ndisati ndambowona mboro yangu yakamira sezvayainge yakaita musi uyu. Pakapfuura ka good 20mins vasikana ava vachindibata bata inini ndichisvererawo mazamu avo vese ko uriwe waiyita sei pakadaro. Pandakawona mumwe wacho juice dzebeche rake dzakuita kuyerera muzvidya ndakaziva kuti akuda kundisvira, ndakatora kondom mudrawer ndokubva ndamutambidza haana kuita nharo akapfekedza mboro yangu ndokubva ayita yekugarira uuummmm imi ndakaroverwa chimwe chikapa chekuti ndakaita kunge kunge munhu akupenda nekunakirwa.
Musikana uyu wekutanga akandikwira achibva atunda ka two kese apa inini mboro yainge yakamira chete, mumwe wacho ipapo aingozvibata bata achichemerera nekuda kukwira apa beche ratota kunge raiyerera mvura, ndakauya pamusoro kooo ndaidawo kukoira kuti zvimwe ndingatundewo but pakaita kagood 20 mins ndikanzwa munhu akuita kunditsunya nekumara musana wangu wese, ndokubva atundawo zvakare. Apa ndainge ndakuita worry kuti pamwe something was worng neni or musikana wangu ainge andiita something kuti mboro yangu irambe yakamira kusvikira adzoka. Vasikana ava vese vakaramba vakatarisa mboro yangu zvikanzii aaah iwe wadyei nhasi kana nezuro sei usiri kutunda, munhu haungaite more 45mins uchikoira usina kutunda chii?
Ndakashaya kuti ndinoti chii ndipo pakabva panzi nemumwe wacho haa ndisvire nekumashure, ndiange ndakutya guys asi pandatanga sooo iiii kunakirwa kwacho, ndezvekunyepa kuti unokoira doggy ukasatunda, ndakavachinjanisa vese nedoggy vakapfungama pabed ndichiiti ndikaita 10 strokes uku ndobva ndaita dzimwe uyu. Pasina chinguva ndakatanga kunzwa kurwadziwa kunge kunakirwa kunge munhu arikuda kuweta apa hurume huchiwungana, ndakatanga kusvira mumwe wacho zvine speed ndizweee iye akudairirawo achingoti aaah aaah aaah iwe kani chitunda kani ndiye tssaaaa tsaaaaa tsssaaaa. Vasikana ivavo vakati ndichingotunda vakapfeka hembe dzavo ndokubva vangobuda havana kana zvavakataura.
Ndakadeedzera vanhu vava padoor kuti ko Nandos but hapana akapindura, vakangoyenda. Mangwana acho ndakasangana navo zvikangonzi haaa shamwari une hutsinye musikana wako uya anorarama kana uchisvira munhu kudaro everyday… Ndakangoti sorry guys handizive kuti chiii it was first time kuita zvinhu zvakadaro. Ndakazovatengera Nandos ndikavapa mumwe musi apa babe rainge radzoka ndikangoti they helped me one day but we did not get into detail nazvo nekuti babe rangu trusts me…
Source – Nhau Dzevakuru
Previous articleAkanditi arikutoda kusvirwa nekuti nguva yainge yareba
Next article6 Pics of Mzansi’s 19 year old Boooty Queen that has been causing chaos on Social Media